के तपाईंका बच्चा गे-लेस्बियन छन् ? गे–लेस्बियन ! कुनै रोग होइन, उपचारले काम गर्दैन
Thursday, 14 Jun, 2018 6:12 PM
‘उनको विवाह भन्दा पहिला हामीसँग जान्नुहोस’ यो दाबी हो दिल्ली गुडगाउँस्थित एक थेरापी सेन्टरको, जसको विज्ञापन एक नामी पत्रिकामा जुन १० मा छापिएको थियो । विज्ञापनमा यो पनि दाबी गरिएको थियो, उनीहरुले ‘ डिस्टेंस हिलिङ’द्वारा समलैंगिकताको ‘उपचार’ गर्दछन् ।
विज्ञापन देखेपछि ‘एलजीबीटी एक्टिभिस्ट’ हरिश अथ्यरले थेरापी सेन्टरमा फोन गरे
हरिश आफैंलाई समलिंगी ठान्छन् । हरिशले पत्रिकामा दिएको नम्बरमा फोन गरे र आफू ‘गे’ हुनुको कारण सोधे । जवाफमा भनियो,उनले स्मार्ट फोन जस्ता इलेक्ट्रोनिक्स सामानको अत्यधिक प्रयोग गर्छन त्यसकारण समलिंगी बन्न पुगे ।
यो जवाफ सुनेपछि हरिशले सोधे, ‘मेरी आमा पनि फोनको प्रयोग गर्नुहुन्छ । के वहाँ पनि अब लेस्बियन बन्नु हुन्छ ? ’ जवाफ आयो, महिलाको साथ यस्तो हुँदैन । जवाफ दिनेले यत्तिमात्र भनेन,जुन केटाहरुलाई आमाको धेरै माया गर्छिन त्यस्ता केटाहरु पछि गएर गे बन्छन् पनि भन्यो । थेरापी सेन्टरको मान्छेले कयौं बलिउड हस्ती र नेताहरुको नाम लिएर उनीहरु ‘गे–लेस्बियन’ भएको दाबी समेत गर्यो ।
हरिशसँग यी सबै बातचितको पुरै रेकर्ड पनि सुरक्षीत छ । बीबीसीले पनि विज्ञापन र थेरापी सेन्टरले वेबसाइटमा दिएको नम्बरमा फोन गर्ने प्रयास गर्यो तर सबै फोन अफ थिए ।
के समलैंगिकता कुनै बिमारी हो ?
त्यसो त यो पुरा वाक्यको बीचमा जरुरी सवाल यो हो कि यस प्रकारको दाबीमा कत्तिको सत्यता छ ? के समलैंगिकता साँच्चिनै कुनै बिमारी हो ? के यसको उपचार गर्न सकिन्छ ? केही दिन पहिले ‘इन्डियन साइक्याट्रिक सोसाइटी’ले एक आधिकारिक वक्तव्यमा समलैंगिकतालाई बिमारीको रुपमा हेर्न बन्द गर्नुपर्ने बताएको थियो । सोसाइटीका अध्यक्ष डा. अजित भिडेले फेसबुकमा एक भिडियो पोस्ट गर्दै भनेका थिए,‘पछिल्लो ४०–५० बर्षमा यस्तो कुनै पनि वैज्ञानिक प्रमाण फेला परेको छैन जसले यो सावित गर्न सकोस कि समलैंगिकता एक बिमारी हो भनेर ।’ डा. भिडेले भने, समलिंगी हुनु भनेको केवल फरक हुनु मात्र हो । प्राकृतिक या असामान्य केही होइन । यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने, होमोसेक्शुअल, बाइसेक्शुअल या ट्रांससेक्शुअल हुनु कुनै विमारी होइन, यसकारण यसको उपचारको कुनै प्रश्न नै उठ्दैन ।
हार्मोन्सको गडबडीले समलैंगिकता ?
भारतीय समाजमा ‘एलजीबीटी’ समुदाय र समलैंगिकताको बारेमा यसको अलाबा अन्य मिथक पनि प्रचलनमा छन् । जस्तै, अक्सर मानिसहरुलाई लाग्छ हार्मोन्सको गडबडीले समलैंगिकतालाई जन्म दिन्छ । जबकि यस्तो होइन ।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ र ‘एलजीबीटी’ मामिलाका जानकार डा. पल्लव पटनाकरका अनुसार,‘ कयौं मानिसलाई लाग्छ कि यदि पुरुष गे हुन्छ भने उसको शरीरमा एस्ट्रोजन( महिलाको शरीरमा पाइने हार्मोन) ज्यादा हुन्छ । त्यसैगरी कोही महिला लेस्बियन हुनुमा उसको शरीरमा ‘टेस्टोस्टेरोन’ ( पुरुषको शरीरमा पाइने हार्मोन्स) ज्यादा हुन्छ । साँचो कुरा त के हो भने यी हार्मोन्सको सेक्शुयालिटीसँग कुनै लिनुदिनु छैन ।
गे–पुरुष महिलाले जस्तै व्यवहार गर्छन ?
समलैंगिकताको बारेमा भनिने सुनिने केही यस्ता बेतुकको कुरा नीतिशले बीबीसीसँग बाँडे । १९ बर्षिय नीतिश समलिंगी हुन । उनले भने,‘मान्छेहरुलाई लाग्छ, हरेक गे–पुरुषको हावभाव महिलाकै जस्तो हुन्छ । लेस्बियन महिला हमेशा ‘रफ एन्ड टफ’ लुक्समा देखिन्छन् । उनीहरुले केटीले जस्तो कपडा लगाउँदैनन् । यो विल्कुल गलत हो । तपाईले कसैको हावभाव या कपडा लगाउने तरिकाले उसको सेक्शुयालीटीको बारेमा कसरी अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ ?’ नीतिशले हालै रिलिज भएको फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’को उदाहारण दिए । फिल्मको एक सिनमा सोनम कपूरकी आमाले उनीसँग भन्छिन्,‘ यो के हो हमेशा प्यान्ट लगाइराख्ने ? लेस्बोझै लाग्छ । ’
गल्र्स कलेजमा पढ्दा लेस्बियन बन्छन् केटीहरु ?
यसको अलावा अन्य कयौं धारणाको बारेमा नीतिशले बताए जो ‘एलजीबीटी’ समुदायको बारेमा प्रचलित छ ।
नीतिश भन्छन्,‘ मैले सुनेको छु कि गल्र्स कलेजमा पढ्ने या गल्र्स होस्टेलमामा बस्ने केटीहरु लेस्बियन बन्छन् । त्यसैगरी ब्वाइज कलेजमा पढ्ने या ब्वाइज होस्टेलमा बस्ने केटाहरु गे–बन्छन् । जुन स्कुलमा केटा–केटीसँगै पढ्छन् त्यहाँ के कोही गे–या लेस्बियन हुँदैनन् ?’ योभन्दा अघि केरलाका एक प्रोफेसरले भनेका थिए, जिन्स लगाउने केटीहरुले ट्रांसजेन्डर बच्चाको जन्म दिन्छिन् । के यिनीमध्ये कुनै कुरा साँचो हो ? डा. पल्लब पटनाकरको स्पस्ट जवाफ छ– होइन ।
डा.पल्लव भन्छन्,‘ वास्तवमा विवाह र बच्चा पैदा गर्नु, यी दुई चिज समाजमा अनिवार्य बनाइएको छ । यदि कोही यी कुराहरुबाट पछि हट्यो भने उसलाई गलत सावित गर्ने कोशिस गरिन्छ । समलैंगिकतालाई पनि यसै कारण विमारी सम्झिइन्छ।’ उनी भन्छन्,‘पत्रिकामा छापिने यस्ता विज्ञापन या कुनै थेरापी सेन्टरको बहकाउमा आउनुभन्दा तपार्ईले समलैंगिकताको बारेमा पढ्नुहोस । यसबारेमा खुलेर कुराकानी गरौं र यो स्वीकार गरौं कि समलैंगिकता अप्राकृतिक या असामान्य होइन न त यो कुनै विमारी नै हो जसको उपचार आवश्यक होस ।